Magaalada Duusamareeb magaca ma laga beddeli karaa? | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Magaalada Duusamareeb magaca ma laga beddeli karaa?
Magaalada Duusamareeb magaca ma laga beddeli karaa?
Shacabka Galmudug gaar ahaan kuwa ku nool caasimadda Dhuusamareeb ayaa ku kala aragti duwan magaca cusub ee uu magaaladaasi uu shalay u bixiyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Magaalada Dhuusamareeb waxaa ku soo dhammaaday shirkii saddexaad oo qayb ka ahaa, shirar lagaga arrinsanayey marxaladda kalaguurka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sidii lagu gaadhi lahaa hannaan doorasho oo la isla oggol yahay.
Dhammaadkii shirkaas ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi ‘Farmaajo, ka sheegay in loo keenay shirkii hore ee Dhuusamareeb 2 qorshe magaca lagaga beddelayo magaaladan, oo ay kaga codsadeen masuuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Maamulkaas, Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’.
Madaxweynaha ayaa sheegay, inuu codsigaasi aqbalay oo magaalada uu u bixiyey magaca Samareeb.
Haddaba, tan iyo arrintaasi soo baxday waxaa sii baahayey hadalhaynta ku aaddan magac bixintan. Dadka diiddan ayaa ku doodaya in magacan uu dastuuri yahay, si loo bedellana ay tahay in loo maro hannaanka saxda ah. Kuwa taageersan in magaalada loogu yeero Samareeb ayaa sheegaya in magaca Dhuusamareeb uusan habbooneyn luuqad ahaan.
Cabdiraxmaan Cali Geeda-Qorow waa maayarka Dhuusamareeb waxa ay BBC-du weydiisay sababta keentay in magaca laga beddelo magaalada:
“Magaca Dhuusamareeb waa magac qadiimi ah, magaaladaanu magaalooyinka dalka Soomaaliya ugu da’ weyn ayay ka mid tahay, hayeeshee dad reer Galmudug ayaa wxay yidhaahdeen ah in magacani marka loo fiiriyo luuqadda Soomaaliga uu yahay magac laga fiican yahay”
Waxaana uu intaasi ku daray in muddaba arrintani socotay, oo ay dad badan rabeen in la beddelo. Waxaa se jira dad fara badan oo qaba in magacani yahay ‘astaan’ magaaladu leedahay oo dad badan ayuu xasuus ku leeyahay, kuwo badan ayay shahaadooyinkooda waxbarashada ku yaallaan, sidaa darteed in la beddelo ma aha. Waxa ay sidoo kale ku doodayaan in uu dastuuri oo hab dastuuri ah yadoo loo maro la beddelo karo.
dad badan oo baraha bulshada isticmaala ayaa fasiraado kala duwan ka bixiyey magac, qaarkood ayaa u fasirtay ereyga ‘samoreeb’ sidii samahii ama wanaaggii la reebay oo xumaan looga gudbay.
Halka dad kalena ku fasireen halkaa lagu keydiyey samaha. sida dhaxalreeb oo kale.
Dadkaas ayuu duqa magaalada Dhuusamareeb ku qeexay in qolaba halka ay la tahay ay ka dhigayaan, oo kuwa rabaana dhanka wanaagsan u qaadayaan, kuwa diiddanina ay dhanka xun u qaadayaan.
Cabdiramaan Cali Geeddi, ayaa mar kale BBC-du weydiisay, haddiiba isqabqabsiga dhashay halkee loogA guuri doonaa? Arrintu se halkee ku dhammaan doontaa?
Wuxuu sheegay in magacan la horkeeni doono dhirka golaha wasiirrada ee Galmudug, kaddibna Baarlamaanka loo gudbin doono, hadday ansixiyaana uu sidaa ku dhaqan geli doono.
“Magacu waa dastuuri haddii la leeyahay, waa inay golaha wasiirradu soo jeedinta gudbiyaan, kaddibna Baarlamaanku ansixiyaan” ayuu yidhi maayarku.
Dhanka kale waxa uu sheegay haddii la ansixiyo, in taariikhdii ay Dhuusamareeb lahayd la waafjin doono magacan cusub iyada oo loo saaryo guddi aqoon yahanno ah oo arrintaasi ka shaqaysa.
Magaalada Dhuusamareeb, asee hadda madaxweynaha Soomaaliya sheegay in loo baxshey magaca Samareeb waxay ku taallaa badhtamaha Soomaaliya, waxaana ay ahayd caasimadda gobolka Galgaduud, Hadda se waa magaalo madaxda maamulka Galmudug.
Maqaal horeSawirro: Guddoomiye Najah & Mas’uuliyiin kale oo kormeer ku tegay degmada Afgooye
Maqaal XigaMadaxweyne Lafta Gareen oo amar siiyey laamaha amniga K/Galbeed